K: ကျိုက်ထီးရိုးကို ရောက်ခဲ့တယ်
မနက်ခင်းရောင်နီနဲ့..မိုးနှင်းလေးမစို့မပို့ကြောင့်သင်းနေတဲ့ ရိုးပြတ်နံ့လေးတွေဟာ... အိုး...ဘာနဲ့မှမတူဘူး။.
ကျိူက်ထိုကိုဝင်လာတော့.. ၈ နာရီလောက်ရှိပီ..။ “စိမ်းလဲ့တင်မှကြိုဆိုပါ၏” ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကြီးက..
ကိုယ့်အတွက်က..တတိယအကြိမ်ဆိုပေမဲ့..လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၈ နှစ်လောက်ကရယ်. .တက္ကသိုလ်ရောက်ခါစ .၉၁ ခုနှစ်လောက်ကရယ်ဆိုတော့..အတော့်ကိုပြောင်းလဲသွားပီ...အဓိက-က..ကိုယ့်ဘိုးတော်..။
ကောင်းကင်ကြိုးလုပ်မှာကွ..” တဲ့..။ တောသူတောင်သားပုံစံ..အဲဒီ ကိုလူပျော်ကို..လှမ်းကြည့်
ကို..ခုတော့..န အ ဖ ကျေးဇူးနဲ့..စွေ့ကနဲရောက်သွားပီ...
သူပြောတာလည်း..ဟုတ်ပါတယ်..နိုင်ငံခြားသားတွေ..တကူးတကလာပီး..golden rock ဆိုတာ
ခရီးသွားအေဂျင်စီတွေကို..ကြိုတင်သတင်းပေးထားပေါ့..။ နိုင်ငံခြားသား complain တက်မတက်
အင်း..အင်း..ပြန်ထွက်လာပီ..စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့...“ငါ့ကိုအတင်းမောင်းထုတ်တယ်..ဘာရမလဲ..ဓါတ်ပုံရအောင်ရိုက်လာတယ်..ဒီလောက်တကူးတကလာပီး.အဲဒီကြက်မတ၀ပ်ဆိုတာကို..မမြငရလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ ” တဲ့။
U are reallyagood writer. BTW I've never been there in my whole life. I always want to be there but I have no chance at all.
တီကေ ဒီတစ်ခါလာ ကျနော့်ဆီ မေးလ်ပို့ လာကြိုမယ်နော့် အမေ့ကိုလည်း ဘူးသီးနဲ့ကြက်သားချက်ကျွေးဖို့ ပြောပြီးထမင်းစားဖိတ်မယ်း) ကုရင်ဒုံးယိမ်းလည်း လိုက်ပြမယ် ပွဲတော်ရက် ဆီမီး9000 ပန်း 9000 ဆို အရမ်းစည်တာ ပေါမ ပေါပဲ :P
ဟင်... အဲသာ ကေ ခြစ်လိုက်တာလား.... :O